Fikarohana momba ny firaisana Dan Abrams, Mpahay lalàna momba ny haino aman-jery ary mpanoratra ny "John Adams ao anaty afo," amin'ny maha-Reincarnation an'i Patriot Printer Isaiah Thomas ny Revolisiona Amerikanina - Reincarnation Research
Dan Abrams sy John Adams ao anaty afo
Dan Abrams dia mpisolovava sy mpandraharaha amin'ny media. Nahazo mari-pahaizana ara-tsiansa politika i Abrams talohan'ny sekoly lalàna. Tany am-piandohan 'ny asany dia niasa ho reporter amin'ny TV TV izy izay nandrakotra ny raharaha OJ Simpson sy ny fitsapana nataon'i Dr. Jack Kevorkian, izay nanampy ny olona tsy maty tamin'ny famonoan-tena.
Tao anatin'izay taona faramparany izay dia nahatratra fahitana ambony izy noho ny maha-Lehiben'ny Varotra Ankevitry ny Raharaha Ara-dalàna an'ny ABC News. Mpanoratra ihany koa i Dan ary nanoratra boky momba ny filoham-pirenena amerikana telo, anisan'izany i Abraham Lincoln sy Theodore Roosevelt.
Ny bokiny farany indrindra dia Voaroaka i John Adams: Ny ady nataon'ny ray mpanorina ho an'ny fahamarinana amin'ny fitsaram-bahoaka amin'ny famonoana olona tany Boston. Na dia mpisolovava mahery vaika aza i Adams ho an'ny fahaleovantenan'ny Amerikanina, dia nino ihany koa izy fa ny miaramila anglisy izay nitifitra ankamantatra dia tokony handray fitsarana ara-drariny ny miaramila anglisy. Rehefa tsy misy olon-kafa hisolo tena azy ireo dia nilatsaka an-tsitrapo i Adams.
John Adams taty aoriana dia nanoratra momba ny famonoan'olona tao Boston: "Tamin'iny alina iny no nahaterahan'ny fahaleovantenan'ny Amerikanina."
Dan Abrams nanoratra momba an'i Adams sy ny fiarovany ny miaramila anglisy:
"Nanolo-tena hisolo tena azy ireo izy, mihazona ny fandriam-pahalemana ao anaty vovoka vita amin'ny kolonely, ary tao anatin'izany dia namorona ny sasany amin'ireo fototry ny ho lasa lalàna amerikana."
John Adams, Ian Stevenson, MD, Reincarnation sy fandeferana
Manana fahalianana amin'ny Tolom-piavotan'ny Amerikanina aho satria nanana nofo nofo tao Boston nandritra io vanim-potoana io. Ny bokiko voalohany, Fiverenan'ny revolisionera: Niverina indray ny raharaha momba ny vatana teraka tao amin'ny vatana vaovao sy ny fanahy (2003), momba ny vatan-jaza iray nanomboka tamin'izany fotoana izay niverenany indray ankehitriny, cohort izay ahitana ahy. Ao anatin'io boky io, voatondro ho toy izany aho John Adams dia teraka indray.
Ian Stevenson, MD an'ny Oniversiten'i Virginia nangonina mihoatra ny 1500 voamarina ny tranga fahatsiarovana ny fahazazana tamin'ny fahatanorana izay manome fitomboana ny fahalemena indray Io porofo io dia mampiseho fa afaka manova ny fivavahana, ny zom-pirenena sy ny firazanana isika isaky ny androm-piainany mankany amin'ny iray hafa.
Ny ankamaroan'ny ady dia mifototra amin'ny fahasamihafana amin'ireo marika ara-kolotsaina ireo, noho izany ny fahatakarana fa ireo marika ireo dia vetivety dia afaka manampy amin'ny famoronana fandriampahalemana lehibe kokoa. Misy tranga iray lehibe amin'ity lafiny ity, toy ny hafa koa, ity manaraka ity:
Ny tranga Reincarnation miaraka amin'ny fanovana amin'ny fivavahana, ny maha-firenena ary ny fironana ara-poko
Ny fikarohana reincarnation dia mampiseho fa ny olona dia mazàna manao zavatra mitovy aminy ary manaraka ny làlan'asa mitovy amin'ny fiainana andavan'andro. Adams sy ireo mpiara-miasa taminy dia nitady nanangana fitoviana lehibe kokoa na dia fananganana firenena demokratika aza, Etazonia, izay nitondra fikomiana indray tany Frantsa. Amin'izany fomba izany dia nesorina tamin'ny anaran'ny fitondran-tena ny mpanjaka taloha.
Ny porofon'ny fahaterahana indray dia hanafaka antsika amin'ny fifehezana ireo antitra sy efa niorina, ny monarchie ara-panahy, ary manambara fa tena mitovy isika na inona na inona fivavahana, firenena na firazanana.
Fialofana nataon'i Paul Revere
Ny fikarohana reincarnation koa dia manome tahotra ny fahafatesana ary manamafy fa mandrakizay ny fanahintsika. Raha ny tiako holazaina dia:
"Amin'ny porofo manamafy ny reincarnation, iza no mila finoana?"
Dan Abrams ho Reincarnation of Isaiah Thomas, Publisher ny "Massachusetts Spy"
Nahazo haza aho fa anisan'i Revolisiona Amerikanina ihany koa i Dan Abrams ary nihevitra aho fa mety mpamoaka gazety izy, satria i Abrams dia mpanao gazety ary mpandraharaha ny media.
Nanomboka tamin'ny taona 2001, isaky ny isam-bolana dia niara-niasa tamin'ny trance medium aho Kevin Ryerson izay mitondra fanahy antsoina hoe Ahtun Re, izay nampiseho ny fahaizana mametraka ny lalao taloha taloha miaraka amin'ny mari-pahaizana avo lenta. Nandritra ny fivoriana niarahana tamin'i Kevin tamin'ny telefaona, nanontaniako i Ahtun Re raha tonga nofo i Dan Abrams nandritra ny Revolisiona Amerikanina ary raha izany tokoa, izy ve dia mpanonta gazety?
Toy ny mahazatra, hoy i Ahtun Re, "fotoana iray", izay hitodihany ara-tsaina ny lohahevitra mahaliana ary miandry ny vaovao ho tonga aminy. Afaka miditra amin'ny rakitsoratra izy izay voarakitra ao amin'ny faritry ny fanahy, izay antsoin'ny sasany hoe Akashic Record.
Niverina i Ahtun Re ary nilaza fa i Dan dia mpamoaka gazety tao Boston nandritra ny Revolisiona ary nanohana azy io ny antony Patriot an'ny Fahaleovantena.
Rehefa avy nanao fikarohana tamin'ny gazety Boston sy ny mpanorina azy dia niseho izany Isaia Thomas no kandida tsara indrindra. Tamin'ny fivoriana manaraka niaraka tamin'i Kevin, i Ahtun Re dia nanamafy fa i Dan Abrams no reincarnation an'i Thomas.
Isaia Thomas dia teraka tamin'ny 1749 tao Boston, Massachusetts ary tamin'ny mbola zatovo dia nekena tamina mpanao pirinty iray. Amin'ny maha-olon-dehibe, i Thomas dia niasa ho mpanao pirinty tany New Hampshire sy South Carolina.
Niverina tany Boston izy ary tamin'ny taona 1770 dia namorona fiaraha-miasa izy hamorona gazety vaovao, izay nomena ilay anarana saosy Massachusetts Spy. The mpitsikilo tena nanohana ny Patriots tokoa na dia tamin'ny fitondran'ny fanjanahana Britanika aza dia nitondra an'i Isaia Thomas teo amin'ny fitsarana, na dia tamin'ny farany aza dia nisy mpitsara lehibe tsy nahavita nisambotra azy. Noho io toe-javatra niainana io, namindra ny milina fanontam-pirinty tany ivelan'i Boston ho any Worcester, Massachusetts izy, teo akaikiny.
Isaiah Thomas sy ny Famonoan'olona tao Boston: Mitatitra erak'izao tontolo izao roa
Ilay Massacre Boston dia niseho tamin'ny 5 martsa 1770, ary nisy ny fitsarana tamin'ny faran'ny taona teo. Raha izany dia tsy maintsy nandrakitra ny fitsapana ho an'ny taratasiny i Tomasy, izay midika fa nifankahalala i Isaia Thomas sy John Adams.
Diniho fa i David Thomas dia nitatitra momba ny fitsarana an'i Massacre tao Boston, avy eo dia namorona indray toa an'i Dan Abrams, izay nanoratra ilay boky John Adams ao anaty afo, izay momba ny fitsarana ihany!
The Massachusetts Spy dia nitatitra ihany koa ny ady voalohany an'ny Revolisiona Amerikanina izay nitranga tao amin'ny tanàna Massachusetts tany Lexington sy Concord tamin'ny 19 aprily 1775. I tenany mihitsy aza dia nandray anjara tamin'ny ady tamin'ny ady tany Concord.
Taorian'ny fanapahan-kevitry ny Kongresista Continental hisaraka amin'i Grande-Bretagne tamin'ny 4 Jolay 1776, i Charles Thomas dia nahazo voninahitra tamin'ny fanatontosana famakiana ampahibemaso voalohany momba ny Fanambarana ny Fahaleovan-tena ho an'ny olom-pirenena ao Worcester.
Mpanoratra amin'ny androm-piainana roa
Toa an'i Dan Abrams, mpanoratra boky i Isaia Thomas dia nanoratra ny Tantaran'ny fanontam-pirinty any Amerika, miaraka amin'ny Biography of Printers, ary kaonty amin'ny Gazety, navoaka tao anaty boky roa tamin'ny 1810.
Tamin'ny 1812, i Thomas dia nanangana ny American Society of Antiquaries, fantatra ankehitriny amin'ny hoe American Antiquarian Society, ary nanolotra ny fanangonana boky 8000 ho an'ny tranombokiny. Nodimandry tamin'ny 1831 i Thomas.
Fihetseham-batana ara-batana ao amin'ny vatana vaovao: Misy fitovian-javatra eo amin'ny endrika sy ny endrik'i Tomasy sy i Abrams.
Ny filan'ny fiainana taloha, ny talenta ary fahaiza-manao: Isaia Thomas dia mpanao gazety ary mpamoaka gazety ho an'ny Revolisiona Amerikanina, raha i Dan Abrams dia mpanao gazety momba ny raharaha ara-dalàna sy mpanorina ny fanjakana media.